Video:-Nin xagjir ah oo weerar ka gaystay dalka Jarmalka – Idil News
Video:-Nin xagjir ah oo weerar ka gaystay dalka Jarmalka
Ninka qofka ku dilay toorayda lixda kalena ku dhaawacay tukaanka ku yaal magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka ayaa boolisku sheegeen in uu ahaa “Islaami xag jir ah”.
“Wuxu ahaa nin Islaami xag jir ah laakiin jihaadka uma heellanayn” ayuu yidhi af-hayeenka booliska Andy Grote, waxaanu farta ku fiiqay in ninkan weerarka qaaday uu qabay “xanuunnada nafsaaniga ah”.
Boolisku waxay sheegeen in uu falkaa keli ku haa oo markii dambena ay dad shacaba oo goobta joogay iskugu tageen oo qabteen.
Waa 26 jir waxaanu qabay xanuunnada maskaxda ku dhaca sida ay saraakiil shir jaraa’id ka hadashay sheegeen.
Haweeney 50 jir ah iyo afar nin oo da’doodu u dhaxayso 19 ilaa 64 ayaa uu toorrida la dhacay, nink kale oo 35 jir ahna isagoo qof dhaawacmay qaad is leh ayuu isagan dhaawacay ninka dadka weeraray,hoos ka daawo muuqaalka.